Inqubo uwoyela isizinda lihlotshaniswa ukusetshenziswa imishini ekhethekile ezijulile, okuyinto esekelwe okuthiwa ukudonsa amayunithi. Lolu hlobo ezweni actuator elawulwa opharetha ngesikhathi ukusebenza kahle. Njengomthetho, unyakazisa amafutha esekelwe amaphampu plunger, ukuhlinzeka umsebenzi ingqalasizinda yezimayini.
Ukuqokwa uwoyela futha Jacks
Okuvame kakhulu drive sucker induku iphampa ngoba izimayini inqwaba. Nale umshini abasebenzisi balukhulume imithombo eyiqhwa. Futhi okudume uwoyela negesi imishini e ngesimo rocker olulodwa-ahlomile unyakazisa. imishini enjalo ezisetshenziswa njengeziwusizo idrayivu ngabanye ngesikhathi umkhiqizo kawoyela.
Empeleni, noma yimuphi nengqalasizinda oil-producing igxile ukuqaliswa ukhulisa nsiza. Isimiso jikelele okusebenzela kuyo imishini ingafaniswa umsebenzi isipetu, okuyinto kuleli cala unikezwe sucker induku amaphampu. Futhi njengoba isici esihlala ifakwe unyakazisa amakholomu amafutha kokucindezelwa amashubhu. Ngokusebenzisa lezi ziteshi, futhi iqalise yokutakula namafutha yokudlulisela.
uwoyela Process rocker
inhlangano kwetheknoloji yenqubo ukukhiqizwa ihlukaniswe izigaba eziningana. Qala nge imishini, le zazo ukujula ongafinyelela amakhilomitha ambalwa. Njengomthetho, zenzelwe 1500 imitha imbobo, nemicengezi irekhodi kahle ngesikhathi 4000 m. Ngaphezu kwalokho efakwe bezinhlamvu ipayipi, okuyinto ziyisisekelo ingqalasizinda uwoyela. Activator kwe-futha kuyoba ohlelweni. Ukuze ukuqonda yokusebenza yayo simiso kufanele ukubhekana kanjani unyakazisa uwoyela usebenza isakhiwo isiyonke iphayiphi. It wenza umsebenzi idrayivu indlela, lapho wenza isenzo reciprocating. Rockers sisebenza isisekelo cyclical, okuvumela uwoyela ukuba agxilise emhlabeni kahle ukuqinisekisa ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi kahle. Ngaphezu kwalokho, lesi simiso yesevisi kwehlisa ukugqoka izingxenye zalesi sihlahla.
Amafutha kudivayisi unyakazisa
Umshini ogibele isisekelo ekhethekile ukhonkolo njengesisekelo sokwakha. Nansi yokubeka inkundla ukulawula esiteshini i-opharetha. Ngemva kokuphothulwa inhlangano itholakala platform rocker equilibrated ikhanda ekhethekile, okuyilona elisebenzayo futhi uxhumeke kwi-intambo ukumiswa. Ukuqinisekisa amandla isinyathelo Amafutha ukuzamazamisa gear kanye ifakwe i motor ngogesi. Lesi sakamuva singabangela akhiwe ngaphansi yesikhulumi, kodwa ngenxa ingozi eliphezulu ukuxhashazwa lokhu kucushwa liyilungiselelo kuyaqabukela esetshenziswa.
Mayelana gear, kuba esebenzisa indlela crank exhunywe kwi-rocker. Le nqwaba yakhelwe ukuguqula isenzo rotary shaft sohlelweni reciprocating. Neziphawulekayo futhi zokulawula umsebenzi esiteshini. Ngokuvamile, isisekelo sayo yakha eziyinkimbinkimbi nge kagesi ukugxusha Boxed. Kuphoqelekile ukusetha inamba ye manual kanye mechanical ukulawula ukubopha edluliselwe.
Naphezu isimiso esifanayo ngezisetshenziswa uwoyela, amayunithi umndeni-uzotshala emelelwa izinguqulo ezihlukahlukene. Njengoba sekushiwo, izinto ezithandwayo kubhekwa umshini zakudala olinganiselayo, enikeza posterior nenkanuko edlulele induku gearbox exhunywe kwi-uravnoveshivatelem uzimele. Kodwa kukhona okunye kule imishini. Lokhu wokubacindezela induku futha, okuyinto ogibele flange engenhla valve downhole. Timphawu kanye nezinzuzo zihlanganisa ukuqedwa kunesidingo sokusungula isiguqo isisekelo. Lokhu umehluko kubalulekile uma kuziwa ukuthuthukiswa imithombo eyiqhwa esishintshashintshayo. Kunezinye izici kumasistimu wokubacindezela. Ikakhulukazi Basikisela ukuqaliswa ukulungiswa njalo elibanzi ubude ukuthi kwenza kube nokwenzeka ukuba ngokuqondile ukhethe izindlela okusebenzela kuyo imishini.
Izimpawu ukudonsa amayunithi
Bocwepheshe ahlaziye anhlobonhlobo nemingcele lobuchwepheshe nokusebenza ezinikeza ngezizathu ngokukhetha umshini othize. Ikakhulukazi, umthwalo kulinganiselwa ku induku, ubude unhlangothi, usayizi reducer, torque, imvamisa uhla oscillation nokunye okunjalo. D.
Omunye izici eyinhloko amayunithi uzotshala kuyinto amandla motor kagesi. Ngakho, amaphampu uwoyela ejwayelekile ukuba sibhekane ngokuphumelelayo imisebenzi enikeziwe okuphakelayo amandla 20-25 kW. Uhlaziyo ezijulile nemingcele sihlanganisa ibhande-uhlobo ezimali, diameters isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo kanye nezici ohlelweni ukubopha. Ngesikhathi esifanayo, ngaphezu amakhono okusebenza abasebenzi, kufanele kukhunjulwe kanye nosayizi imingcele, okuyinto enze kube nokwenzeka isimiso ukufakwa umshini othize ezimweni ezithile. Nalapha futhi, ukufakwa ejwayelekile ungase ube ubude 7 m kanye ububanzi - komyalelo wokungabi 2-2.5 m isisindo evamile idlule 10 m ..
Njengoba ngakhonza ezizamazamisa uwoyela?
Ukuze sisebenze abaklami ukudonsa iyunithi ukunikela amalungiselelo akhethekile. Ngokwesibonelo, i-service unqamula i-rocker ukukhwezwa platform okhethekile nge drive izinhlelo. Opharetha zingalawula kwemigomo yokuhlukanisa ikhanda ukwesekwa Equalizer ihlanganiswe emzimbeni ukufakwa. Isifanekiso kinematic kohlelo drive kuqinisekisa ukunyakaza kahle ekhanda futhi kungase kushintshwe inhlangano okusheshayo phansi, uma kunesidingo. Kubalulekile ukwehlukanisa imisebenzi opharetha ngqo nabasebenzi elikhuthaza ngobuchwepheshe uwoyela amaphampu enkonzweni. Uma kuqala wahlanganyela ukulawulwa kuyanda uwoyela, wesibili ithrekhi ukusebenza ezingeni izindlela ukongiwa imisebenzi yawo ngaphakathi nokubekezelela isiqongo imithwalo.
Abakhiqizi uzotshala amayunithi njalo ukunikela izixazululo ezintsha zobuchwepheshe amafutha inqubo ukukhiqizwa, kodwa ukubuyekeza ezibucayi imiqondo ezikhona akudingekile ukukhuluma. Iqiniso lokuthi imishini uwoyela negesi kuyabiza, futhi amakhasimende abaningi bamanqikanqika ukushintsha ngoxhaxha akhona imishini. izingxenye Noma kunjalo, buyekeza obuncane kakhulu yisikhathi usaqhubeka. Futhi, kunomkhuba sokushintshela kusukela emshinini okulinganisa a wokubacindezela ephelele. Lokhu kungenxa isifiso nokwandisa ingqalasizinda ekhona. Ngenxa yalokho, izinkampani uwoyela zinciphise izindleko lenhlangano futhi ukusebenza imishini, kodwa ngesikhathi esifanayo akusenzi izinga lomkhiqizo target.
Izinhlobo yemfucumfucu: incazelo, izici, ububanzi kanye nemvelaphi
Solid futhi uketshezi rocket izinjini
Industrial flotators zokuhlanzwa amanzi angcolile: izinhlobo kudivayisi, isimiso yokusebenza
Glass - lokho nokuthi kwenziwa kanjani? izakhiwo ingilazi
I Mi-38: Imininingwane nezithombe
Kanjani ukuze uthumele ingane kwesinye isikole, futhi kungakhathaliseki ukuthi ukukwenza?
Rufer - ubani lo? Uyini ukufulela?
Indlela yokwenza manicure amahle aluhlaza
Lapho eMoscow ukuba uhambe ukudoba: incazelo
Ezifudukayo - umuntu inkululeko yokushintsha indawo yokuhlala. Imithetho emisha izifiki
Kusukela sizogqokani oluluhlaza izicathulo: izithombe ezithakazelisayo, futhi inhlanganisela yalokhu izincomo ochwepheshe
Gqoka intombazane yakhuluma incazelo kanye imidwebo
Apelwe - yini le lokudlela? Indlela ukupheka apelwe?
"Crystal" - champagne, okuthiwa "igolide uketshezi"
Openwork amahanisi hook: isikimu
Indlela Baxoxa ukuthi wonke umuntu wayenesithakazelo?